Ogwe osisi ndị na-aga na ime ụlọ ọ bụla n'ụlọ anyị | Bezzia
Ogwe osisi ndị na-aga na ụlọ ọ bụla dị n'ụlọ gị
Susana godoy | 02/06/2021 16:00 | .Chọ Mma
Mgbe anyị chere echiche banyere ịchọ mma, o doro anya na shelf osisi Ha bụ otu n'ime nhọrọ ndị ahụ anyị na-agaghị echefu. Ha dị ezigbo mkpa ọ bụghị naanị maka otu ụlọ n'ụlọ mana maka ọtụtụ. Anyị na-achọ ya dị ka ihe eji achọ mma kamakwa dị ka ebe nchekwa.
Ya mere, a ga-enwe nke ga-adaba na mkpa anyị ma yana ụlọ ọ bụla. Ya mere, anyị na-enyocha ndị niile ga-eme ka anyị pụọ ngwa ngwa ma n'otu oge ahụ ga-ekpuchi n'akụkụ ọ bụla. You chọrọ ịma ka esi jiri ha chọọ ụlọ nke ọ bụla mma?
1 Ogwe osisi ndị dị elu iji chọọ ụlọ ndị ahụ mma
2 Ihe nkpuchi osisi maka oche ma ọ bụ ebe ọrụ
3 Oghere dị ala maka ime ụlọ ụmụaka
4 Zuru okè shelves maka ime
5 Shelving na-enweghị oghere nkesa ohere
Ogwe osisi ndị dị elu iji chọọ ụlọ ndị ahụ mma
Ikekwe n'ime ime ụlọ anyị chọrọ ịhụ otú shelf ogologo na warara na-anọ nnukwu ebe. Ọ bụ eziokwu na n'otu aka, iji nwee ike idowe akwụkwọ, ị nwere ike ịkụ nzọ mgbe niile n'ụlọ elu toro ogologo ma dị warara. Mana anyi makwara na ihe ndi modular bu otu n’ime ezigbo echiche. Nke a bụ na anyị nwere ike idowe ọtụtụ shelf ndị a, otu na-esote onye ọzọ. Yabụ anyị ga - etolite nnukwu ihe ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ụtọ anyị ma ọ bụrụ na ohere ga - enye ya. Mana ka ọ dị ka ọ nwere ike, ee na n'ime ime ụlọ ha na-etinyekwu ebe n'elu shelf ndị a dịka ụlọ elu.
Ihe nkpuchi osisi maka oche ma ọ bụ ebe ọrụ
Ọ bụ eziokwu na enweghị ụzọ doro anya iji chọọ mma, n'ihi na ha nwere ike enweghị njedebe dịka enwere uto. Mana n'ọfịs ma ọ bụ ime ụlọ ọmụmụ, anyị nwere ike ịkụ nzọ n'elu shelf. N'ụzọ nke a, Anyị ga-edobe akwụkwọ ma ọ bụ faịlụ ahụ ma a ga-achịkọta ha karịa ka ha dị na mgbidi. Na ha anyị ga-echekwa nnukwu ohere, ebe ọ bụ na iji mgbidi eme ihe mgbe niile bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma anyị nwere.
Na-esote na shelf anyị nwekwara ike ịhọrọ na square shelves nwere ike ikpokọta tinyere mgbidi na asymmetrical ụzọ. Yabụ, anyị ga - emepụta mmetụta kacha dị mma na ịchọ mma anyị. Ihe dị mma banyere shelf osisi na ụdị ha bụ na anyị nwere ike ikpokọta ha otu ọ bụla anyị chọrọ yana ọbụnadị tee ha ma ọ bụrụ na ị hụ na ọ dị mkpa. N'ihi na agba bụkwa ihe ọzọ dị na nkọwa ndị ahụ dị mkpa anyị chọrọ mgbe niile.
Oghere dị ala maka ime ụlọ ụmụaka
Maka ime ụlọ ihi ụra nke obere ụlọ, anyị chọkwara a usoro nke shelf na-enyere anyị aka ịchekwa ihe niile eji egwuri egwu na akwụkwọ. Ya mere, ọ dịghị ihe dị ka ịkụ nzọ dịkwa n'ama. Ndị a nwere ike dị na agba dị iche iche na ha ga-abụ ihe zuru oke zuru oke iji nwee obi ụtọ ma nwee obi ụtọ na gburugburu ebe obibi. Na mgbakwunye na ụdị niile anyị nwere ike ịchọta, ekwesịrị ikwu na anyị chọrọ ya ka ọ bụrụ osisi na-eguzogide, n'ihi na anyị amatala na anyị achọghị ihe ọghọm na-enweghị isi.
Zuru okè shelves maka ime
Ọzọ nke isi ebe bụ ime. Yabụ, anyị chọrọ ha iji gboo mkpa mpaghara a na karịa ihe niile, ha na-aga na-elekwasị anya na headboard akụkụ. Yabụ ebe a, anyị nwere ike ịchọta shelf na-echekwa ihe dị mkpa dị ka elekere mkpuchi, akwụkwọ na ihe ndị ọzọ eji achọ mma. Ma, ọ bụkwa eziokwu na ị nwere ike ịhọrọ iguzo na shelf modular, na-adabere mgbe niile na oghere ị nwere. Ọ bụ ezi echiche ịnwe ike inye ya mmetụ imepụta ihe mgbe ị na-achọ idobe ihe niile ịchọrọ n'ime ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ohere, ị maraworị na mgbidi ka bụ ezigbo ndị enyi anyị.
Shelving na-enweghị oghere nkesa ohere
Mgbe anyị chọrọ iwepụ oghere, anyị nwere ya dị mfe. Anyị nwere ike ịkụ nzọ n'echiche dịka nke a dabere na ịnụ ụtọ shelf nke enweghị ala, ya bụ, mepere, ma debe ya kewapụ ụlọ obibi na ụlọ iri nri na ọnụ ụzọ mbata. Echiche okike nke ga-ezu oke isonye n'ụdị ịchọ mma niile ị bu n'uche. Shelves na-amasị osisi shelf? Ebee ka ị ga-edebe ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Ogwe osisi ndị na-aga na ụlọ ọ bụla dị n'ụlọ gị
Choputa oge ntoju, mkpokọta SS21 nke Compañía Fantástica
Echiche mkpịsị aka nke ga - ekpochapụ oge okpomọkụ a 2021